နေ့စဉ်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genvers] ကွင်းဆင်းအလုပ်များအတွက် Job site
"နေ့စဉ်ငွေပေးချေခြင်း" အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်စာရင်း
နေ့စဉ်ငွေပေးချေခြင်းအပါအ ၀ င်လုပ်ငန်းခွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
(1-30) / 58
ပထမ ဦး ဆုံး Ken-O Expressway Co. , Ltd.
ငြမ်း Tobi ★ဂုဏ်ပြုလွှာတွင်ပါဝင်ခြင်း ၆၀,၀၀၀ ★အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ~ ၂၀၀၀၀ ယန်း☆အတွေ့အကြုံမရှိသူ ၁၂၀၀၀ ယန်းစတင်★လုံခြုံရေးအစောင့်နေ့လုပ်ခ ၁၀,၀၀၀ ယန်း★နေ့စဉ်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ★ဇနီး၏အပြည့်အဝထောက်ပံ့ကြေး! ★အလုပ်ပြောင်းခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း။သင်သည်သင်၏အလုပ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကစိတ်မပူပါနှင့်။၎င်းသည်★ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကုမ္မဏီများအားချက်ချင်းစုဆောင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်
★☆စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း!ပြင်ဆင်ပြီးအမျိုးအစားငြမ်းဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း☆★★☆★အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှု။ကျယ်ပြန့်သော★ရိယာပစ္စည်းများသိုလှောင်မှု★ jo ★★ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရန်ယန်းငွေ ၆၀၀၀၀ (စည်းမျဉ်းအတွင်း ၃ ဆလျှော့စျေး) ★☆★ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မိသားစုနှင့်ဘဝကိုအခိုင်အမာထောက်ပံ့ပါမည်★☆★☆နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှု / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်း) ☆★☆★ ၀ င်ငွေပိုမိုချင်သောသူများ shift ညဆိုင်း / အားလပ်ရက်များရရှိနိုင်★★☆★ contract ကန်ထရိုက်တာများခန့်ထားခြင်း us ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါရန် feel ကျေးဇူးပြု၍ ☆★ ၀ န်ထမ်းအားလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအလေးပေးသောအလုပ်ခွင်။ အဆင်ပြေ!စိတ်အားထက်သန်သူများ enthusi ကျွန်ုပ်တို့သည်လစာကိုပုံမှန်တိုးမြှင့်ပေးမည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ - ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုအသုံးချပါ။အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလူ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်လျှောက်ထားရန်မလိုပါ။မင်းရဲ့စွမ်းအားအသစ်ကိုငါတို့စောင့်နေတယ်။
■ကွင်းပုံစံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ experience အတွေ့အကြုံမရှိပါ - လုံခြုံရေးအစောင့်☆☆အလယ် / အဟောင်း / အလွတ်မရှိ■တစ်ခုတည်းသောမာစတာ / ကန်ထရိုက်
■ [ကုမ္ပဏီ] ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း★ယန်း ၆၀,၀၀၀ ကိုကုမ္ပဏီထဲ ၀ င်ရန်အတွက်ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်လက်ခံပါသည်။ (စည်းမျဉ်းများအတွင်း ၃ ဆလျှော့စျေး) ★ (၁) အတွေ့အကြုံနည်းပါးသူများပင်တစ်နေ့လျှင်ယန်း ၁၂၀၀၀ မှစတင်သည်။ ★ကျွန်ုပ်၌ကလေးများရှိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံး Ken-O Expressway Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Kato ပစ္စည်းစက်ရုံ, Ltd.
အများပြည်သူသုံးအဆောက်အအုံများ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ အထွေထွေအိမ်များစသည်တို့ကိုအဓိကအားဖြင့်ပိုက်လိုင်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများတွင်ရေပေးဝေရေးနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ပါတယ်။ဤအလုပ်သည်သူတို့၏အလုပ်ကိုဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။အရင်ကဆိုရင်ပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတောင်ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ခွင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝအတွက်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအခြေအနေများဖြစ်သည့်အလုပ်များပြီးပါကပင်ပန်းသည့်ပါတီများနှင့် ၀ န်ထမ်းများခရီးစဉ်များအတွက်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဘဝကိုကတိပေးသည်။
■စက်ပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်း•မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအလုပ် / အထွေထွေအလုပ် ၀ န်ထမ်းများ▪စက်ကိရိယာပစ္စည်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၀ န်ထမ်းများ■ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်း
[၀ န်ထမ်း] အတွေ့အကြုံရှိသူ - လစဉ်လစာ ၂၅၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော + စရိတ်အမျိုးမျိုး (နေ့စဉ်လစာတန်ဘိုး ၁၀၀၀ ယန်း - ၁၆၀၀၀ ယန်း) အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်း - (သင်တန်း ...
Tsuchiura City, Ibaraki စီရင်စု
Tsuchiura City, Tsukuba City, Ushiku City, Ryugasaki City, Mito City စသည်တို့ကို Ibaraki စီရင်စု၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင်ဗဟိုပြုထားသည့်ဆင်ခြေဖုံးဒေသများ * လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိပါ။ [ရုံး] ၁၈၇-၁၇၈ Naka၊ Tsuchiura City, Ibaraki Prefecture အနီးဆုံးဘူတာ ...
Kato ပစ္စည်းစက်ရုံ, Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Takano Doken Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်၏ကုသမှုကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ your ၎င်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူသင်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။
အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ # အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်အကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများကသင့်အားဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတိုဆုံးအကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့ပါမည်။ # အတွေ့အကြုံရှိသောလူများသည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွကြိုးစား။ သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အထိတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ကြသည်။
Tobi နှင့်မြေကြီးလုပ်ငန်း (အထွေထွေအလုပ်သမားများ)
●နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၄၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်ပိုနေတယ်
Takano Doken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Saiyu Kogyo Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Honey Badger ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
Sadagumi Co. , Ltd.
[ငြမ်း] သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည့်တိုင်ယန်း ၁၂၀၀၀ ကိုစတင်ပါ။သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
■ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်နှင့်အနှောက်အယှက်မရှိအလုပ်များနေသည်။၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သက်တောင့်သက်သာစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂုဏ်ယူသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ၀ င်ငွေမြင့်မားမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝတိုးတက်မှုကိုအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ လာပါ။
Tobi (Tobi အလုပ်သင်)၊
Tobi ဆောက်လုပ်ရေးနေ့စဉ်လစာယန်း ၁၅၀၀၀ ~ Tobi အလုပ်သင်နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၃၀၀၀ ~ မြေကြီးလုပ်ငန်းခွင်နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၂၀၀၀ ~
တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးများ (တိုကျို၊ ခီဘာ၊ ဆိုင်းတာမာစသည်တို့) ☆တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK at ရုံး၌စုဆောင်း / ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ၌ပင်အလုပ်အကိုင် / မတင်ပါ။
Sadagumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Suzuki Kogyosho Co. , Ltd.
★ people ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိသောလူများသည်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံကြသည်။ ★ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းကိရိယာများအလုပ် - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများများပြားလာသော်လည်းလုပ်သားအင်အားမလုံလောက်သေးပါ။ ★ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်အတွေ့အကြုံ★
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဒေသခံ Minamisenju တွင်အမြစ်တွယ်နေသည်မှာအနှစ် ၅၀ ရှိပြီ။စတိုးဆိုင်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များသို့အစိုးရရုံးများမှတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ရလဒ်အနေနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်။သို့သော်စီမံကိန်းအရေအတွက်တိုးများလာနေသော်လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာ၎င်းတို့အားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ရေပတ်ပတ်လည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူများစွာ၏စွမ်းအားလိုအပ်သည်။your သင့်အရည်အချင်းနှင့်ယခင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပါမည်။ our ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုသင့်အားအသိပေးရန် "တစ်ရက်အတွေ့အကြုံပါ ၀ င်ခြင်း" ကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ ◎
■စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၀ န်ထမ်းများ▪ရေပိုက်သမား (ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေမြောင်းကိရိယာ)
လစဉ်လစာ ၃၅၀,၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀ ယန်း * အသက်၊ အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစသည်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ * စောစီးစွာထွက်ခွာ / အချိန်ပိုလစာ၊ အားလပ်ရက်အလုပ်စရိတ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စသည့်အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ ...
၇-၂၇-၁၆ Minamisenju၊ Arakawa-ku, Tokyo တိုကျို၊ Saitama၊ Chiba၊ Kanagawa နှင့် Arakawa-ku ပေါ်တွင်ဗဟိုပြုသောမြို့ပြareaရိယာတစ်ခုလုံးတွင်နေရာများရှိသည်။
Suzuki Kogyosho Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
လှုံ့ဆော်မှု!စွမ်းအင်!အလေးအနက်ထား!အကယ်၍ သင့်တွင်ဤငွေရှိလျှင်သင်ငွေရှာနိုင်သောအလုပ်ခွင်။ !!စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းခွင်၌လုပ်ခလစာအများဆုံးရရှိသောအလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဤသို့သောခေတ်တွင်ပင်ငွေအမြောက်အများရှာဖွေပါ။ ●အလုပ်သင်များအတွက်ပင်နေ့စဉ်လစာသည် ၁၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။
ပုံသဏ္workာန်လက်သမား (လက်သမား / အလုပ်သင်)
အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လစာ ၁၇၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀ ယန်းအလုပ်သင်နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ မှ ၁၄၀၀၀ ယန်း
[ရုံး] Toyoshiki၊ Kashiwa City, Chiba Prefecture ထိုနေရာများသည်တိုကျိုမက်ထရိုပိုလစ်တန်partsရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင်တည်ရှိပြီးတိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်ဗဟိုပြုသည်။
[Formwork ဖျက်သိမ်းခြင်း] အလုပ်ကိုလည်းယခုနှစ်တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။သငျသညျ, "အပတ်စဉ်" ပိုက်ဆံဝင်ငွေချင်တယ်ဆိုရင်!လက်မှုပညာရှင်များ (အတွေ့အကြုံရှိသူများ) သည်လည်းအစက်အပြောက်များ၌ပါ ၀ င်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ◎ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်လုပ်သမျှကိုပြန်ယူပြီးပြန်ပေးသည်¥ကျွန်ုပ်တို့သည် "တနင်္ဂနွေလျှောက်လွှာများ" ကိုလည်းလက်ခံသည်။
◎ဆိုက်ကိုတိုကျိုမြို့တွင်ဗဟိုပြုပြီးသင်ပြန်နိုင်သည်။ small လူမှုအာမခံကိုကုမ္ပဏီငယ်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။သငျသညျခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပမာဏမြားမြားသနေသည်။ ¥◎လက်သမားတို့ကပြောက်အလုပ် OK ကိုပါ!ဘေးထွက်အလုပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုရယူပါ။ el အနည်းငယ်သောအထက်တန်းလွှာလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်သည်။ ◎တစ် ဦး တည်းသောမာစတာနှင့်အုပ်စုလိုက်လျှောက်လွှာများကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။ experience လစာနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုသည်အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ကောင်းမွန်သည်။ [ယခင်အလုပ်လစာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း] 28 ၂၈ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောဝါရင့်အကြီးအကဲတစ် ဦး သည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။ [အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်လိုလျှင် Zhougumi]
[နေ့စဉ်လစာစနစ်] ◎အလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးယန်း ၁၆,၀၀၀ ~ + ပမာဏ◎လက်မှုပညာရှင်ယန်း ၁၅၀၀၀ ~ ◎လက်ယန်း ၁၀၀၀၀ ~ * အတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုင်ဆောင်သူများသည်ညှိနှိုင်းနိုင်သည် (ယခင်အလုပ်လစာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်)
■ရုံး - ၈-၁၆-၃ Kitakarayama၊ Setagaya-ku, Tokyo [အလုပ်နေရာသည် Setagaya-ku, Tokyo, Sumida-ku, Kita-ku နှင့် Adachi-ku အပါအဝင်မြို့တော်itanရိယာတစ်ခုလုံးပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။Kanagawa စီရင်စု၊ Saitama စီရင်စု၊ Chiba ...
Tokatsu Kiko Co. , Ltd.
ail မီးရထားလမ်းဖောက်ခြင်း၊ လမ်းကြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း main ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအလုပ်မှာတိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်မြေအောက်ရထားများဖြစ်သည်။အခြေခံအားဖြင့်အလုပ်ကိုညသန်းခေါင် (၂ မှ ၃ နာရီ) တွင်ပြုလုပ်သည်။တစ်ပတ်မှာ 23-2 ရက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲ။
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■ အကယ်၍ သင်သည်ရထားလမ်းကိုနှစ်သက်လျှင်၊ !! 〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ ခုရှိမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်အဓိကအလုပ်လုပ်သည်။အခြေခံအားဖြင့်အလုပ်ကိုညသန်းခေါင် (၂ မှ ၃ နာရီ) တွင်ပြုလုပ်သည်။တစ်ပတ်မှာ 23-2 ရက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲ။အတွေ့အကြုံရှိသူများလည်းအမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးရှိသည်!ကောင်းသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ပင်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်။ [တိုတောင်းသောအချိန်တိုအတွင်းတွင် "Tokatsu Kiko" နှင့်ဝင်ငွေမြင့်မားသည်။ ] their မိမိတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုယုံကြည်မှုအနည်းငယ်ရှိသူများ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းသူများ responsibility တာဝန်ယူမှုရှိသူများကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစောင့်နေပါသည်။
အထက် 1,500 ယန်း
Track အလုပ် (ရထားလမ်းအလုပ်)
နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း [ညအချိန်တွင် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီ] * အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကာလရှိသည် * အတွေ့အကြုံရှိသူများ - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၁၀၀၀
တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်၊ ချီဘစီရင်စု၊ Saitama စီရင်စုများစသည်တို့ဖြစ်သည် [Toei Subway, Tokyo Metro, Tobu Line, Keisei Line, Shin Keisei Line, Hokuso Line, JR Line]
Tokatsu Kiko Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Kozaki Gumi Co. , Ltd.
ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်★စီမံကိန်းများစွာ★ရေပေးဝေမှုနှင့်ရေနုတ်မြောင်းစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ related ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်သည် experience အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသောနိုင်ငံခြားသားများ OK ★အလုပ်ခွင်တွင် ၀ င်ငွေမရသူများ★အလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားသူများသို့မဟုတ်ဗလာ လူအချို့ကကြိုဆိုကြသည်။ ★ပူးပေါင်းပါဝင်သောအတွေ့အကြုံကိုလည်းကြိုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်စိတ်ချရသောသမ္မတ၏လက်အောက်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ ယ်သူအချို့နှစ်သက်သောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။သင်သည်များစွာသောစီမံကိန်းများနှင့်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်။အလုပ်လွယ်ကူခြင်းကကြီးမားတဲ့အချက်ပဲ။၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
[ကုမ္ပဏီ] အတွေ့အကြုံရှိသူ◆နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူ◆နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ ★အတွေ့အကြုံရှိသူအရည်အချင်းနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ဦး စားပေးကုသမှု★တတ်နိုင်မှု (အလုပ်သင်) ဖြစ်နိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့်ယိုကိုစူရှီနှင့်ကန်နာဂါ - ken ရှိဟီဂါရှီ - အူမီ - ချို၊ ယိုကိုစူရှီ၊
Kozaki Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Sanyu ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ichihara အရောင်းရုံး
အုပ်စုတွင် ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်မှာ ၂၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။၎င်းသည်အဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး ၏ကန်ထရိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်လုပ်ငန်းပမာဏသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလွန်များပြားပြီးတည်ငြိမ်သည်။ဆေးရုံများနှင့်လေဆိပ်များကဲ့သို့သောနေရာများသည်နာမည်ကြီးပြီးကြီးမားသည်။ complete အဆောင်အပြီးအပြီး◎အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုရရှိရန်ထောက်ပံ့မှုကဲ့သို့သောကုသမှုသည်ပြီးပြည့်စုံသည်☆ [Ichihara အရောင်းဌာနအပြင်အောက်ပါအရောင်းဌာနများတွင်တစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းမှု] ■ Tomisato အရောင်းရုံး■ Yachiyo အရောင်းရုံး
① Tobi အလုပ်② Earthwork / အထွေထွေအလုပ်③ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
(၁) Tobi ၏နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၆၀၀၀ မှ (၂) ယန်း ၁၃၀၀၀ မှနေ့စဉ်လစာ (၃) ယန်း ၂၇၀,၀၀၀ မှလစဉ်ဆောက်လုပ်ရေးလစာ
Ichihara City, Chiba စီရင်စု
● Sanyu ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ichihara အရောင်းရုံးခန်း● ၂-၂-၁ Yawatakitacho၊ Ichihara City, Chiba စီရင်စု ...
Sanyu ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ichihara အရောင်းရုံးအလုပ်များကြည့်ပါ
M's Make Co. , Ltd.
တစ်ပတ်လျှင်2ရက်★နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုအထောက်အပံ့★အသေးစားအချိန်ပို☆စောစောစီးစီးမြင့်တက်ရရှိနိုင်★အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ★စနစ်မီးဖိုချောင်တွင်အထူးပြု★လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအတွက်တပ်ဆင်ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း★လူတစ် ဦး စီကိုရွေးချယ်သည့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ ◆တစ် ဦး တည်းသောမာစတာ◇ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများလည်းရှာဖွေနေသည်။ you အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
★ week တစ်ပတ်လျှင် (၂) ရက်အားလပ်ရက် (စနေနေ့ / တနင်္ဂနွေ) အားလပ်ရက်များကိုလည်းပိတ်ထားသည် over ☆★အချိန်ပိုနီးပါးမရှိပါ♪ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍“ စောစောစီးစီးတက်ခြင်း” လည်း★★ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စီမံကိန်းများစွာ၊ အလုပ်ပြတ်ခြင်းမရှိ☆★☆ ★အရည်အချင်း☆သင်《 လှုံ့ဆော်မှု / စိတ်အားထက်သန်မှု》 ★☆◆တစ် ဦး တည်းသောမာစတာ◇ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများရှာဖွေနေသည်◆★လက်ရှိအသက် ၂၀ မှ ၄၀ အတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်လူများကိုတက်ကြွစွာငှားရမ်းပါမည်။ ကွက်လပ်နှင့်!လက်မှုပညာရှင်များသည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္immediatelyကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စွာ♪ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်ခြင်းမည်သည့်အရာမဆိုကောင်းပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ♪♪
အိမ်ရာသုံးပစ္စည်းများ / ပရိဘောဂတပ်ဆင်ခြင်း [ကုမ္ပဏီ] ◆စနစ်မီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများ people အတွေ့အကြုံရှိသူများ၏ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူများ (အလုပ်သင်) များကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။
[ကုမ္ပဏီ] ◆နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀-၁၅၀၀၀ ယန်း★အတွေ့အကြုံရှိသောအရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ဦး စားပေးကုသမှု★အတွေ့အကြုံမရှိသော (အလုပ်သင်) ဖြစ်နိုင်သည်☆စမ်းသပ်ကာလရရှိနိုင်ပါသည်★နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုများရရှိနိုင်ပါသည် s သင့် ...
Isehara City, Kanagawa စီရင်စု
အဓိကအားဖြင့် Kanagawa စီရင်စုနှင့်တိုကျိုအနောက်ပိုင်း★ရိယာတွင်★နံနက်ခင်း၌ရုံး၌ တွေ့ဆုံ၍ site သို့သွားပါမည်။ * * တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာနိုင်ခြင်း (site အခြေအနေပေါ် မူတည်၍)
M's Make Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု၊ စီမံကိန်းများစွာ★ Toko [အတွေ့အကြုံရှိသူအရေးပေါ်လူသစ်ခေါ်ယူခြင်း၊ အလုပ်သင်ကြိုဆိုသည်] ☆ Truck (Unic) driver ★ 20-40s တက်ကြွစွာ!ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူစုဆောင်းမှု☆ငါအလုပ်လုပ်ချင်!ဤစိတ်အားထက်သန်မှုသည်အရေးကြီးသည်★☆★ [ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း] မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ (စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) အားအလျင်အမြန်စုဆောင်းခြင်း
performance ★ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စီမံကိန်းများစွာ experienced အတွေ့အကြုံရှိသောလူများခန့်အပ်မှု★☆★☆ ၀ န်ထမ်းများမှာကြင်နာမှုရှိပြီး၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လည်းထူးခြားသည်။ ♪ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကွန်ဒိုမီနီယံပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုငြမ်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုကိုင်တွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အဓိကအရောင်းအ ၀ ယ်များစွာရှိပြီးတည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှရှေ့သို့ခုန်ပျံနိုင်စေရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ၀ န်ထမ်းအသစ်များတိုးလာမည်။ဤအချိန်၌အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးသည်၊ သို့သော်အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်လျှောက်ထားရန်လွတ်လပ်စွာဆုတောင်းပေးပါ။၀ န်ထမ်းများခရီးစဉ်နှင့်ညစာစားပွဲများကဲ့သို့ပျော်စရာကောင်းနေချိန်တွင်သင်ငွေအမြောက်အများရနိုင်သည်။အလုပ်အတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်အရေးကြီးသည်။
(၁) တိုကျို (၂) အလုပ်သင် (အတွေ့အကြုံမရှိသူ) (၃) ကုန်တင်ယာဉ် (ယူနီ) ကားမောင်းသူ (၄) တွဲဖက်ကုမ္ပဏီ (စီးပွားဖက်)
နေ့စဉ်လစာ①ယန်း ၁၃၀၀၀ - ယန်း ၁၉၀၀၀ - အရည်အချင်းများ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။
ယိုကိုဟားမားနှင့်တိုကျိုကဲ့သို့သော Kanagawa စီရင်စုရှိ site တစ်ခုချင်းစီ။ the ရုံးသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်ထို site သို့သွားမည်။ (Yokohama) * တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK ☆ပစ္စည်းစင်တာသည် Saitama စီရင်စုတွင်ရှိသည်။
Shimano Co. , Ltd.
[စက်ရုံလုပ်သား] အတွေ့အကြုံမရှိကြသူများပင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သည့်အလုပ်ခွင်။ me အစားအစာ ၃ ခု၊ လေအေးပေးစက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ တီဗွီ၊ အိပ်ရာတို့ပါ ၀ င်သည့်သီးသန့်ခန်းဆောင် ရှိ၍ သင်ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်။ ※※※
[စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး / မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၀ န်ထမ်း] အတွေ့အကြုံနည်းပါးသူများပင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကတိပေးသည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့လူတွေအတွက်၊ ထောက်ပံ့ကြေးတွေအပါအ ၀ င်ဒုတိယနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ကုသမှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာပါ။ကျေးဇူးပြု၍ အခြေအနေများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မှုသည် "Shimano" ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။
[စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး / မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၀ န်ထမ်းများ]
●နေ့စဉ်လုပ်ခယန်း ၉၅၀၀ ယန်းမှ ၁၅၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
● Chiba စီရင်စု၊ Ichihara City ကိုဗဟိုပြုသည့်ကန်တိုဒေသရှိနေရာတစ်ခုစီ
Shimano Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Waganse Co. , Ltd.
"ငါအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်ကပြီးပြည့်စုံတယ်။ "အလုပ်ပြုတ်ခြင်းမရှိဘဲတည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်လုံခြုံသော ၀ င်ငွေများ! !!
သငျသညျ "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်", "ရှည်လျား" နှင့် "ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာဆည်းပူး" နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု!ကြိုးစားအားထုတ်သော ၀ န်ထမ်းများကိုသူအမြဲတမ်းထောက်ခံသည်။လစာနှင့်ကုသမှုရရှိနိုင်ပါသည်။ထို့နောက်သင့်လျှောက်လွှာကိုတင်ပါ။
နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကာလရှိပါသည်
Hanamigawa ရပ်ကွက်, Chiba City, Chiba စီရင်စု
[ရုံး] တိုကျို၊ ဆိုင်းတာမာ၊ ချီဘ၊ အီဘရာကီနှင့်ကန်တို97ရိယာ ၉၇-၂ Hanashima-cho၊ Hanamikawa-ku, Chiba-shi, Chiba
Waganse Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်။ မြင့်မားသောဝင်ငွေ!သင်သည်ကောင်းမွန်သောအနားယူပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ * အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည်အချိန်ပိုင်းအလုပ်နှင့်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်နှင့်အလုပ်သမား၏လက်ထောက်အလုပ်မှလက်ထောက်အဖြစ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
စီးပွားရေးဘူတာများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုကိုရှာဖွေနေသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည်ကြိုဆိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးသည်။တက်ကြွစုဆောင်းမှု! * အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အစပိုင်းတွင်အလုပ်သမားများ၏လက်ထောက်အလုပ်မှသင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်သူမှလက်ထောက်အဖြစ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်များနေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများရနိုင်သည်
အများပြည်သူဆောက်လုပ်ရေး site ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများနှင့်အလုပ်သမားများ
★ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု <အတွေ့အကြုံမရှိ>> လစဉ်လစာ ၃၀၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ ယန်း * စမ်းသပ်ကာလ (၁-၃ လ) * အတွေ့အကြုံမရှိသူသည်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ၏အရန်လုပ်ငန်းမှပထမဆုံးနိုးထသည်။
တိုကျို၊ ဌာနချုပ် / ၅-၈-၅ အိုဝါဒမာချိ၊ Hachioji-shi တိုကျို။ * လွှဲပြောင်းမရပါ။Tama ဒေသရှိနေရာတစ်ခုစီ၊ အဓိကအားဖြင့် Hachioji တွင်ဖြစ်သည်
သာမန်လိုင်စင်မှာ OK / အစားထိုးယာဉ်မောင်း / ညသာလွှဲပြောင်းခြင်း★စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်အတွက်နာရီအလိုက်လုပ်အားခထုတ်ပေးသည်
W အလုပ်လုပ်ပါသည်အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုမှု
①ကားမောင်းသူအေးဂျင့်။ driver တွဲဖက်မောင်းသူ
①ယာဉ်မောင်းအေဂျင်စီယာဉ်မောင်းပြီးအသံအတိုးအကျယ်စနစ်ခန့်မှန်းခြေယန်း ၂၀၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀ ခန့်သည်အလုပ်ချိန်နှင့်အလုပ်လုပ်ချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ driver ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူလိုက်ပါနေသော Proxy နာရီ - ၂၂ နာရီအထိလစာသည် ...
တိုကျိုတို့တို့တို့တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတို Min တိုတိုတိုတိုတိုတိုကျူတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတို - တိုကျို၊
[လက်သမားဆရာလုပ်သူ] အချိန်သည်ထိုသို့သောအချိန်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်နေရာများစွာနှင့်အလုပ်များနေသည်။၎င်းသည်ပျမ်းမျှအသက် ၃၀ ၀ န်းကျင်ရှိသောတက်ကြွသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးငွေအမြောက်အများရရှိရန်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂုဏ်ယူစွာထုတ်ဖော်ထားသည်။
# Formwork အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာကမင်းလက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရပြီးခိုင်မာသော ၀ င်ငွေရခြင်းဖြစ်သည်။ကွန်ကရစ်အဆောက်အအုံတစ်ခုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည်ဘယ်တော့မျှပျောက်ကွယ်သွားနိုင်စရာမရှိသည့်အရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နည်းပညာကိုလေ့လာပြီးသည့်အခါသင်သွားလေရာရာ၌အလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မည်။ထို့အပြင်၊ သင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအဆောက်အအုံပြီးစီးသောအခါ၌သင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာသင်မည်သည့်နေရာမှမရရှိနိုင်သည့်ကြီးမားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နောက်တစ်ဆင့်အတွက်ကြီးမားသောစွမ်းအားလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
●နေ့စဉ်လစာ [လက်သမား] နေ့စဉ်လစာ / ၁၈,၀၀၀ ယန်းမှ ၂၂၀၀၀ ယန်း [အလုပ်သင်] နေ့စဉ်လစာ / ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ Start * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ ...
Atsugi City, Kanagawa စီရင်စု
● Atsugi City, Kanagawa စီရင်စု, Kanagawa စီရင်စု၏နေရာများနှင့်၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံးများအပေါ်ဗဟိုပြု။ * တိုက်ရိုက်ပြန်လာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
# အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ၎င်းသည်အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ အတွင်းရှိလူများကိုဗဟိုပြုသည့်အလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်။အသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားရန်စွမ်းအားငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။ထို့ထက်ကားသင်၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သင်လိုအပ်သည်။လူအချို့ကိုရှာနေပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဦး စွာခေါ်ပါ။
Kawagoe City, Saitama စီရင်စု
[မြေကြီးလုပ်ငန်း / အထွေထွေအလုပ် / ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်] အစ မှစတင်၍ အစပြုခြင်း★ << အဆောင်အလုံးစုံ
# လူမှုရေးအာမခံနှင့်အလုပ်သမားများ၏မတော်တဆထိခိုက်မှုလျော်ကြေးပေးခြင်းအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်အေးအေးထားစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။ ●ကျွမ်းကျင်မှုအတန်းများကိုပိုပိုယူရလိမ့်မည်။ ●အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေကိုအစကတည်းကဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး။ မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုလျှောက်ထားပါ။
မြေကြီးအလုပ်၊ အထွေထွေအလုပ်၊ ဖျက်သိမ်းရေး ၀ န်ထမ်းများ
[အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ - ၁၀၅၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးမျိုး [အတွေ့အကြုံမရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ - ယန်း ၉၅၀၀ ~ * သင်တန်းကာလရရှိနိုင်★အပတ်စဉ်တက်ရောက်ခြင်း [ပြီးပြည့်စုံသောတက်ရောက်ခြင်းဆု ... ]
Inage Ward၊ Chiba City၊ Chiba စီရင်စု
[ရုံး] ၃၇-၃ ဟဂ္ဂဲချိုချို၊ အင်းage-ku၊ Chiba-shi, Chiba [ဆိုက်] Chiba စီရင်စုနှင့်တိုကျိုဆင်ခြေဖုံး
Akira Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်
business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်လုပ်ရန်။အရေးတကြီးစုဆောင်းမှုအတွက်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း! expansion စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ပိုက်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုပြပါ။ * လျှောက်လွှာနှင့်အင်တာဗျူးများကိုအားလပ်ရက်များ၌ပင်လက်ခံသည်။ * သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အား ဦး စွာဆက်သွယ်ပါ။
■■ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်နေခြင်း။ ■■မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်အလုပ်ပြောင်းမည်ကိုမသိပါကကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ပထမ ဦး စွာကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိကျွမ်းပါ။ အများပြည်သူဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအတွက်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအိမ်များမှကွန်ဒိုမီနီယံများအထိရေပိုက်လုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောအခြားအလုပ်အကိုင်များကိုလည်းအဓိကလုပ်ကိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်နှင့်လူမှုအခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ထမ်းများကိုအတွေ့အကြုံရှိသူ၊အတွေ့အကြုံရှိလူများ!ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုပင်ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
Earthwork ၀ န်ထမ်းများ (ကုမ္ပဏီ) (က)
[၀ န်ထမ်း] အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၅၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောစရိတ်အမျိုးမျိုး * လစဉ်ဝင်ငွေ ၃၅၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက။သင်အဆက်မပြတ်ဝင်ငွေနိုင်!အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်း ~ (လေ့ကျင့်သင်တန်းကာလ ...
Konosu City, Saitama စီရင်စု
2442-1 Konosu City, Saitama စီရင်စု Saitama စီရင်စု၏အနှံ့အပြားရှိအခြားစီရင်စုများရှိရာနေရာများ (တိုကျို၊ ချီဘ၊ အိုင်ဘာကီ၊ ဂွန်မား)
Akira Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
Katsumitsu Co. , Ltd.
သင်ငွေရှာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ။လူတစ်ယောက်အတွက်အဲဒါကိုမြှင့်ပါ။အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်။
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး လျှင်နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၄၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း
Kasukabe City, Saitama စီရင်စု
တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုသည် Saitama စီရင်စု၊ Kasukabe City (ဗဟိုအနီးရှိနေရာများစွာ) ကိုဗဟိုပြုသည်။ * တိုက်ရိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်ပြန်လာခြင်း
Katsumitsu Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
ality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဦး စားပေး≫ ot လှုံ့ဆော်မှု၊ the ☆★ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ၃၀၀၀၀ ယန်းအတွက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့်အခကြေးငွေရှိပါသည်။ ☆နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေခြင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်မေးခွန်းအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ orm အဆောင်ကိုလည်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်။အချိန်ပိုမပါဘဲပုဂ္ဂလိကဖြည့်ဆည်း! !!
နေ့စဉ်လစာ [ကုမ္ပဏီ] ၁၃၀၀၀ ယန်းမှ ၁၈၀၀၀ ယန်းနေ့စဉ်နေ့စား [၁၀၀၀၀ ယန်း]
Nishitokyo City, Tokyo
6-1-35-5 Nakamachi, Nishitokyo-shi, တိုကျို Seibu Ikebukuro လိုင်းရှိ "Hoya ဘူတာ"၊ Seibu Shinjuku လိုင်းရှိ "Higashi-Fushimi ဘူတာ" မှာဆုံဖို့ဒါမှမဟုတ် Kanto toရိယာကိုသွားနိုင်ပါတယ်။